Lammiileen Suuriyaa kumaatamaan lakkaawaman naannawa Guutaa Bahaa keessaa baqachutti jiran - NuuralHudaa
Lammiileen Suuriyaa kumaatamaan lakkaawaman naannawa Guutaa Bahaa keessaa baqachutti jiran
Last updated Jul 5, 2018 15
Haleellaa waraanni mootummaa Suuriyaa qilleensa irraan naannawa Guutaa Bahaa keessatti hammeesse hordofuun, ummanni kumaatamaan lakkaahamu baqataa jira. Gareen Syrian Observatory Group jedhamu akka ibsetti, waraana waggoota torbaaf Suuriyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun guyyaa tokkotti ummanni akka kana baay’ina qabu nannawa tokko irraa baqatee hin beeku.
Ganama Jum’aa har’aa qofa Guutaa Bahaa nannnawa Kafr Batnaa jedhumu keessatti halellaa waraanni Mootummaa raawwateen daa’imman jaha dabalatee namoonni nagahaa 46 kan ajjeefaman tahuu gabaasni argame ni mul’isa.
Halkan kaleessaa irraa jalqabee hanga ganama har’aatti qofa, naannawa haleellaan itti hammaate keessaa namoonni 13,000 ol taha, gara naannawa Baha Damashq kan too’annaa mootummaa jala jirutti kan baqatan tahuu Ministeerri ittisa Ruusiyaa beeksise. Gareen Syrian Observatory Group akka jedhutti Guutaa Bahaa nannawa magaala Humeeriyaa keessaa qofa halkan edaa irraa jalqabee namoonni 20,000 ol tahan kan baqatan tahuu ibse.
May 20, 2022 sa;aa 5:29 pm Update tahe